Gbanwee ogo / nkeji / sekọnd ka ntụpọ - Geofumed
Febụwarị, 2010 Cartografia, downloads, Google Earth / Maps
Oge ụfọdụ gara aga, anọ m na-arịọ maka nke a, ebe ọ bụ na enyi ahụ yiri ka obere ngwa ngwa nakwa na taa bụ ụbọchị iji mee ọtụtụ ihe, ebe a bụ ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịmegharị ntọala geographic, ogo na decimals.
Ntak emi okpụhọde ke okpokoro
Ọ na-adịkarị ịchọta nhazi nke dị ogo, minit, sekọnd, dịka ọmụmaatụ:
N pụtara na ọ bụ latitude 75 dị elu karịa akara, ọ bụrụ na o nwere S, ọ ga-apụta na ọ dị na mpaghara ndịda. N'ihe banyere ịdị ogologo, ha ga-enwe E ma ọ bụ W, dabere na ha nọ n'ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ nke Greenwich meridian
Mmemme dịka Google Earth na ArcGIS chọrọ ka ha gaa nhazi usoro, dika:
Latitude, ọ bụrụ na ọ dị n'okpuru equator, ọ ga-abụ ihe na-adịghị mma, otu ihe ahụ ga-eme na longitude, nke ga-abụ ihe na-adịghị mma maka ebe ọdịda anyanwụ. Ekwadoro m ka ị ghọta ya, jiri Google Earth gwuo ntakịrị, na-agbanwe nhọrọ ngosi UTM, geographic, yana yana na-enweghị ntụpọ.
Kedu ka tebụl si arụ ọrụ iji gbanwee nhazi ala, ogo na decimals
Na-eji table Gabriel Ortiz mgbe nile, bụ nke e mere ndokwa maka ngbanwe nke nhazi ala na UTM, na-egosipụta kọlụm ebe a na-ahụ ha n'usoro nha.
Ị nwere ike ịhọrọ spheroid, na elu taabụ.
Ogidi ndị dị na odo, ga-abanye data ahụ, na kọlụm mbụ na-anakwere nọmba nchọpụta nke isi.
N'aka aka nri nke onye ọ bụla bụ ohere na longitude na mkpụrụ nke iri, na-enweghị agbagharị, ya na akara kwekọrọ na ya na-adabaghị na ya mgbe ọ kwekọrọ.
Mpempe akwụkwọ oroma nwere ihe a na-ekwu na ya, ya na ọnụ ọgụgụ, ohere na longitude.
Na nkụnye eji isi mee nke kọlụm a, ị nwere ike tinye ọnụ ọgụgụ nke ntụpọ ebe anyị na-atụ anya ka mmekọrịta ahụ gbaa gburugburu. Kpachara anya na iwetulata ọnụọgụ abụọ nke nhazi ala nwere ike iduga nnukwu njehie.
Zipu nhazi na txt
Iji zipụ ha gaa na txt faịlụ, dị nnọọ mepee faịlụ ọhụrụ, detuo data site na kọmịma kọlụm na mado ha n'ebe ahụ.
E nwere ike ibudata faịlụ a site na Google Earth, na-egosi usoro, dị ka Akọwara m ya na post ahụ.
N'ezie, Datum ga-anọ na WGS84 ka ha wee ghara ịda ebe ọzọ. Ogidi ndị ahụ abụwo mgbe nile ịgbanwe UTM na nkwekọrịta maka AutoCAD, dị ka ọ dị nsụgharị mbụ nke okpokoro a.
Nbudata ya chọrọ onyinye ihe atụ maka nbudata, nke ị nwere ike ime na PayPal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Previous Post«Previous Afọ 120 nke National Geographics
Next Post Ebee ka ndị ọrụ GIS ọhụụ dị?Next »
20 zara na "Tọghata ogo / nkeji / sekọnd ka ntụpọ"
otu m: p
Klas ọ bụla nwere nkeji 60 na nkeji ọ bụla nke 60. Ihe ga - eme bụ na oge a na -achigide ha na maapụ ma ọ bụ na gburugburu, a na-eme ya naanị n'akụkụ ọ bụla ka ha wee ghara ịba karịa okporo mmiri ahụ.
Raúl Navarro kwuru, sị:
Ndewo, gini di? M a obere mgbagwoju anya na nke degrees, nkeji na sekọnd na ọdịdị ala na-chere na onye ọ bụla meridian tụrụ atụ 15 degrees na onye ọ bụla ogo otú tụrụ 4 nkeji, olee otú o si ekwe omume mgbe na 1 60 ogo ụfọdụ nkeji? ma ọ bụ tinye 4 ma ọ bụ ihe nha 60, olee otu ahụ? Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịza m
Otu akara nwere minit 60, ma na nke a, i nweghị minit.
Mana klas ọ bụla nwere sekọnd 3,600 (nkeji nke 60 maka sekọnd 60). Ya mere, oge nke 15 gị bụ:
Mgbe ahu obu ogo 75.004166 na uzo nke achoro.
Ka anyị tinye ihe atụ ọzọ nke na-agụnye ogo, minit na sekọnd:
Onu ule: 75
Nkeji: 14, nke yiri 14 / 60 = 0.23333 degrees
Sekọnd: ​​57 / 3600, nhata ogo 0.0158333.
Ihe mgbakwunye ga-abụ degrees 75.249166.
giiseell :) kwuru, sị:
nke ọma, ọ dịghị ihe m kwesịrị ịma ka m gafere 75 Celsius 15 value uru ,, ya bụ, ka ntụpọ ,, biko nyere aka
Echiche dịgasị iche nke mmega ahụ (ogo ogo na ogo, nkeji na nkeji) dị n'isiokwu a.
Daalụ maka data, n'ezie onye ga-enwe ike iji ya mee ihe.
QUINDIANO kwuru, sị:
Ekpebiri m iziga koodu:
GMS arụ ọrụ (DegreesDecimal)
g = Int (az): m = Int ((az - g) * 60): s = Gburugburu (3600 * (az - g - m / 60), 0): Ọ bụrụ s> = 60 Mgbe s = 0: m = m + 1
Ọ bụrụ m> = 60 Mgbe m = 0: g = g + 1
Ọ bụrụ na g> = 360 Mgbe ahụ g = 0
GMS = g & «Celsius» & m & «'» & s & «» »
Ziga ya na mail editor@geofumadas.com
na mgbe anyị tụlechara ya, anyị ga-agbasa ya.
Emere m ihe mgbakwunye Excel nke ọrụ ya bụ ịgbanwe nrịgo nke Decimal n'ime ederede Nkeji nkeji nkeji
3.15218 = 3 ° 09'7.85 ″, mana amaghi m otu esi ebugo ya na ebe a. Mmadu nyere m aka biko.
Andres Humeres kwuru, sị:
Achọrọ m okpokoro iji tọghata UTM PSAD56 ka Ogologo, nkeji minit
yazmin kwuru, sị:
Numa na-ekele gị nke ukwuu n'ihi na ndị ọrụ dị iche iche ma na-amasị
ọtụtụ ekele! Ị maghi otú furu efu m hahaha, a greetingoo !!!!!!!!!
Nke mbụ, nke mbụ
Nhazi 1 nwere minit 60, nkeji 60 nkeji nkeji.
Kewaa 4,750 n'etiti 60 ịmara ogo ole dị, na-enye 79.16
Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe nrịgo 1 (maka minit 60) tinyere minit 19 ma gbakwunye degrees 79.
Mgbe ngụkọta ole sekọnd e mechiri emechi 79 nkeji, anyị ga-enwe 79 × 60 = 4,740. Nke pụtara na ị ka nwere sekọnd 10 ịhapụ itu 4,750
Ngozi 1, minit 19, 10 sekọnd
Achọrọ m ka ị mee ka ị gwa m oge m ga-agbaso iji gosipụta na ogo, minit na sekọnd: ​​4750 sekọnd. Echeghị m echiche
ihe mgbapụta kwuru, sị:
Aghọtaghị m ..
sarahy kwuru, sị:
anụ ezi adịghị etinye ezi anụ ahụ na-eje ozi
Epa! Nso akwa njikọ. Ekele m gị, enwere ọtụtụ ịhụ ebe ahụ.
You nwere ike iji «Converttụgharị na faịlụ GPS na ederede ederede ma ọ bụ GPX» na weebụsaịtị http://www.gpsvisualizer.com ma ị gbanwee isi ihe na faịlụ GPX ma buru ya na GE ma ọ bụ na Global Mapper ma si ebe ahụ gaa na usoro ị chọrọ.
Ekele m si Argentina na kwa ụbọchị m na-elele blog dị nnọọ ụtọ.